5 Best Iindawo Ukuze Yitya Ice Cream EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > 5 Best Iindawo Ukuze Yitya Ice Cream EYurophu
Lawo aye unethamsanqa elaneleyo ukuba batyelele eYurophu bazi uchulumanco ingqiqo adventure ukuba inikela. Ukuhamba eYurophu inokubuphucula ubomi bakho ngeendlela ezininzi. ukusuka kwiilwimi, izinto kumnandi, kunye nembali lokutya fantastic ukuba asinako ukufumana ekhaya. Kweno nezinyo elithozamisayo ethile ukuze ice cream abone into emangalisayo. nesendlu ice cream ezahlukeneyo kulo lonke elaseYurophu abanikela kwantinga flavour fantastic. Emveni kwakho konke, ice cream yindlela egqibeleleyo ukuhlala emva emthunzini kwaye ukhululeke emva kosuku olude kokuphonononga isixeko. Ukuba uhamba eYurophu kwaye nomthandi ice cream, siye sazinika amava ethu amaninzi behamba eYurophu waza wabeka kunye uluhlu kuwe. ngoko ke, nazi ezinye i indawo engcono ukuba adle ice cream eYurophu.
Eli nqaku labhalelwa ukufundisa malunga nokuHamba koololiwe kwaye lenziwa ngu Gcina A Train engambi Amatikiti kaloliwe Website In The World.
Apho Ukuze Eat Ice Cream In Italy?
Italy idume uthando yalo yokuphila kunye ukutya okumnandi. ice cream yabo ibonakala ukudibanisa ezimbini. abathandi abaninzi ice cream Uyavuma ukuba andihlalanga ude nikuvile ukuziphaka of gelato authentic Italian. Le ukunambitheka esisityebi kunye nemvakalo zizalathisi kucace ukuba le ice cream yenziwe ngumntu leyo akawuvali ngayo ubugcisa babo. Oko kukuthi ukuba unethamsanqa elaneleyo ukuba uhlangabezana ice elungileyo cream indawo.
ERoma likhaya elinye ice cream, nesendlu best eYurophu, njengoko Ubisi. Nomzi uzele abathandi ice cream. imiboniso entle sizwana gelato kuyafana. kunjalo, kwisixeko kunye iivenkile gelato ezingabalekiyo, omnye limi gem efihliweyo ukuba nawuphi na umthandi wejelato kufuneka atyelele. Abakhenkethi abaninzi balapha mhlambi Yizani Il Latte. Yintoni ukwenza ice cream yazo ekhethekileyo ukuze usenokubuza? Okokuqala, Abantu abaninzi onwabele izinongo abazizityebi emnandi abanikela. Zilungisa gelato zabo zemihla ngemihla zisebenzise izithako zemvelo. ice cream ze abo bazizityebi kwaye bukhrim, njengokuba negama libonisa. Ukuba uyazibuza oko Yiza Il Latte iindlela, uya kukuvuyela ukwazi oko kuthetha ukuba “like Ubisi”. Nditsho nabantu abathiye ubisi banokuzonwabela iincasa zabo ezingenalo ubisi. I-buciko emangalisayo. Okwesibini, abantu ndimnqule umoya evenkileni. Lufaka ngumongo nokuva kwazo eRoma.
Apho Ukuze Eat Ice Cream In Germany?
Ice cream emnandi ayisiyiyo into edityaniswa kakhulu neJamani. kunjalo, Ballabeni Ucwambu lomkhenkce apha ukutshintsha ukuba ephuma yalo emangalisayo. Esi siqwenga somkhenkce siseMunich kwaye sinokulandelayo. Lokuphumula kukuye Giorgio Ballabeni, a nguGrandmaster kwimizobo yokwenza ice cream. Waqala i-ice cream njengesiqhelo, kwaye yonke Munich unombulelo kuba. Abakhenkethi abaninzi balapha umthande isitora, ishiya uphononongo olumangalisayo. Xa uzama ice cream lwabo, akukho nzima ukubona isizathu sokuba. Baye aziwa ubugcisa babo bafezeke kwaye enye intle yentsimi lwabo. uthando lwabo luza kuzo zonke scoop. I bonus olongezelelweyo kukuba ilori lwabo ice cream kwaye kube amaqela zabucala!
Apho Ukuze Eat Ice Cream In Hungary?
Ukuba ukhe uzive ikomkhulu Hungary, qiniseka ukuba ahambele Gelarto Rosa. Le ivenkile ice cream okumangalisayo kukuba le intliziyo Budapest. Bonke malunga yesithethe, ubuhlobo, romance, nangothando, olubonakalayo emsebenzini wabo. Ngamanye amazwi, ukuba iingcali okwenyaniso endle. Njengokuba kude njengokuba ice cream lwabo, uya kuba uzakonwaba ukuva ukuba basebenzise kuphela izithako zintle organic. Zonke ivenkile ezinkulu ice cream uyakuphepha ngumntu ice cream. kunjalo, yintoni eyenza Gelarto Rosa Ayikho indlela yabo awenze ekubumbeni ice cream ibe rose. Ukuba uhlala eSzent Istvan Isikwere ngexesha losuku olushushu, Uya kuqiniseka ukubona abantu abaninzi abanezithambiso ezimile okomkhenkce ezihamba-hamba.
Indawo elandelayo yokundwendwela i-ice cream parlour isuka eZurich. phezulu i elibe ice cream abe iphefumlelwe yalo Argentina. Umsunguli Rofe Bote wahlala khona iminyaka engamashumi amabini waza wathabatha inxaxheba kwinkcubeko. Yena wachukunyiswa kunye elinuka wabo, okufa, kunye ice yemvelo cream. Wachukumiseka kangangokuba wandizisa ukuba Switzerland. Namhlanje kukho iivenkile ezimbini e Zurich, kwaye uzikhathaza ngokwenza iingcambu zawo Argentina. Umculo eliphilileyo nokuva nesiLatini qiniseka ukuba phakamisa oomoya zakho nangakumbi njengoko ixesha olichitha emnandi ice cream. Dlala i Umnxybe obalaseleyo flavour Argentina nobuchule Swiss.
The French Zidume izinto ezininzi. Okokuqala, kukho uthando lwabo ngenxa yobugcisa, bokwakha, nefilosofi, leyo ayinakuphikiswa. IParis womyoleli ophilayo ukuba. Okwesibini, bona badumileyo ukupheka emangalisayo. Amakhitshi French ziphakathi kakhulu kakhulu rated ehlabathini, kwaye unokuqiniseka ukuba ingqeqesho ekhitshini obonisa phezulu koozintlango zabo. Ngenxa kule amkhanuke ukutya, akumangalisi ukuba ezinye ice cream ze best eYurophu.
Enye abo kakhulu popular Berthillon. Le yenye nesendlu idumileyo eParis yaye ngesizathu esihle. Kuye kwavulwa kwi 60s yaye ukhonza emnandi ice cream ukususela. Ukhululekile ukuba ukhethe enye ntlobo bawo, kwaye nokuba mix uze utshatise ntlobo ukufumana imixube elungileyo kuwe.
Naphi na apho ukhetha ukuhamba, uqinisekile ukuba ukunandipha scoop omhle ice cream. Nje ukukhumbula ukuba ahlale emva ukonwabela ubuhle isongo xa usenza njalo. Thatha konke oko ukuzwa intlobo emangalisayo ice cream kwezi ndawo ngeendawo.
Ukulungele ukuba ezithandwa nencasa ukuba iYurophu ukuba anikele? Incwadi Yakho Ukuqeqesha Tickets ngoku. Emveni kwalonto, Uyakwazi ukufumana ilizwe elimnandi le-ice cream eYurophu.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Best Iindawo Ukuze Yitya Ice Cream EYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-eat-ice-cream-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#Phola	#ucwambu lomkhenkce	#traveleurope	eurotrip	Ukutyazana
Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
Iingcebiso zokuhamba ngeMoto, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu
Qeqesha ukuhamba iBritane, Uloliwe Travel Czech Republic, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe Travel Holland, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Uloliwe eSwitzerland, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu